त्यसैले आज हामी उपहार सान्टा क्लाउस जहाँ लिन बारेमा कुरा हुनेछ। आखिर, यो प्यारा "पुरानो मान्छे" मात्र एक दिन एक वर्ष काम गरिरहेको छ। यो समयमा, उहाँले संसारभरि उड र प्रत्येक बच्चा एक उपहार दिन सक्छन्। जहाँ तिनीहरूलाई लिन्छ मात्र, प्रश्न उठ्छ। गरेको बुझ्न प्रयास गरौं।
खैर, धेरै "vparivayut" को उपहार सान्टा क्लाउस जहाँ लिन को प्रश्न मा बच्चाहरु छ जो पहिलो विकल्प, - खिलौने को उत्पादन को लागि आफ्नै बोट उपस्थिति छ। सबै वर्ष हाम्रा प्रिय र दयालु पुरानो मान्छे हो थाहा र के वर्तमान प्राप्त गर्न चाहन्छ। साना elves र कारखाना सिर्जना पनि केही साना जनावर पछि सान्ता क्लाउस उपहार तथाकथित। र मा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या प्रकारको पुरानो मानिस घरहरू भन्दा Sweeps र क्रिसमस ट्री खिलौने अन्तर्गत छोड्छ।
को बोट मा स्थित छ उत्तर ध्रुव। Elves र Gnomes "रबर स्ट्याम्प" जो सबै दुनिया भर विभिन्न पसलहरूमा मा मोडेल हो उपहार।
अक्सर आफ्नो बच्चा बताउन गर्न आमाबाबुले प्रयोग गरिन्छ कि अर्को विकल्प, को "हजुरबुबा" सानो प्रस्तुत देखि आयो कसरी - आफ्नो निपटान जादुई शक्तिहरु मा छ छ। कि, छ सान्टा क्लाउस देखि उपहार - यो जादू प्रयोग गरेर खेलौना जस्तै केही छ।
साँच्चै, पुरानो मानिस केही रहस्यवादी शक्ति छ। आखिर, कसरी एक दिन चाँडै संसारभरि उड्न सक्छ, र प्रत्येक घर मा, प्रत्येक घर प्रत्येक बच्चाको लागि वरदान ल्याउन। र जादू मृग, gnomes र elves - सबै उत्तर ध्रुव कुरा अविश्वसनीय र रहस्यमय थियो भन्ने तथ्यलाई बढी प्रमाण छ। तथापि, तपाईं हामी शुरू conjured आफ्नो बच्चा बताउन निर्णय भने, तपाईं एक तार्किक प्रश्न ठोकर गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी आफ्नो बच्चा को तर्क राम्रो विकास गरिएको छ भने। "सान्टा क्लाउस छन्, वास्तवमा, पसलमा। किन मा बेचिएको कि उपहार ल्याए?" - बच्चा सोध्न सक्छ। साँच्चै, जादू - फैंसी को एक उडान र के प्रकृति मा अझै पनि छ को निर्माण। अपेक्षाकृत खिलौने - पक्का लागि हो। यो सम्भव छ "वोल्ट नट आदि खोल्नु", तर यो अवस्था राम्रो छ, जो उपहार सान्टा क्लाउस लिन्छ अर्को व्याख्या, विचार।
खैर, का थप तार्किक विकल्प कुरा गरौं। यो एक "हजुरबुबा" खरीद जस्तै केही छ - उदाहरणका लागि, एक कि क्रिसमस रूखमुनि सबै प्रावधान भनेर भन्छन्। निस्सन्देह, यो बाहिर राम्रो तरिका हो। तर पनि भर्खरै लागि समय रहेको।
आखिर, छोराछोरीलाई अप बढ्न र राम्रो प्राप्त गर्न र राम्रो हामीलाई वरिपरिको विश्व बुझ्न थाल्छन्। एक बच्चा पैसा सम्हाल्न र खरिद के हो बुझ्न सिक्छन्, त्यो मात्र काम गर्ने एक रात एक वर्ष, यस्तो रकम लिएको गर्दै एक देखि तपाईं यस्तो प्रश्न गर्न सक्छ। विशेष गरी बच्चाहरु पहिले नै राम्रो मानिन्छ र "महंगा" र "सस्तो" को अवधारणा बुझ्न गर्दा मामला (यो एकदम दुर्लभ छ तापनि), मा। उसोभए, तपाईं कसरी केही अन्य तरिकामा उपहार सान्टा क्लाउस लिन्छ, यो व्याख्या गर्न सोच्न आवश्यक छ। आखिर, एक बच्चा धेरै महंगा केही माग्यो भने, त्यसपछि तपाईं प्रश्नको जवाफ खोज्न छ: "? एक हजुरबुबा ल्याउन किन सक्दैन गर्न" त्यसैले तर्क गर्न उद्धृत गर्न सकिन्छ भनेर विकल्प एक जोडी छन्। का तिनीहरूलाई थाह प्राप्त गरौं।
खैर, अर्को एकदम तार्किक, तर एकै समयमा आज हाम्रो प्रश्न गर्न एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया मा - जादुई झोला उपस्थिति छ। आखिर, आफ्नो हजुरबुबा सधैं उसलाई वहन। पछि उपहार एक झोला संग सान्टा क्लाउस - यो स्थायी रूपमा बच्चाको मनमा राखे छ छवि छ।
आफ्नो बच्चा अचानक जहाँ चमत्कार पुरानो मानिस उपहार लिन्छ छ को प्रश्न आए भने त तिमी त्यो एक जादू झोला प्रयोग भन्न सकिन्छ। केही वस्तु विचार गर्न यसलाई चलाउन र सोच्न केही प्राप्त यो Suffice। तर, यो मात्र पाहुना सक्नुहुन्छ गर्न। त्यसैले मौका मात्र सान्टा क्लाउस लागि उपलब्ध छ। यो एक एकदम लोकप्रिय प्रतिक्रिया छ। विशेष गरी उहाँले ठूलो कुरा सोध्छन् भने, बच्चा व्याख्या गर्न प्रयास गर्न सम्भव छ। झोला मा फिट गर्दैन भन्ने कुरा छैन दान गर्न सकिन्छ। त्यसैले, तपाईं आफैलाई विषय मा समस्या र बहाना देखि बचत गर्न सक्नुहुन्छ: "किन उहाँले मलाई वास्तविक मोटरसाइकल / कार / घर दिन सक्दैन, र यति मा?" तर, पनि धेरै चासोको विषय संभावना छ जो सबै भन्दा तार्किक जवाफ, हो।
सान्टा क्लाउस उपहार कहाँ लिने? एक अद्वितीय howcast - जवाफ किनभने छोराछोरीलाई धेरै गाह्रो छ। को व्याख्या पछि तपाईं प्रश्नको जवाफ तयार गर्नुपर्छ: "? किन"
तपाईं थाह छ, सान्ता क्लाउस मात्र एक दिन एक वर्ष काम गर्दछ। यो समयमा, त्यो सबै बच्चाहरुका लागि उपहार को धेरै जम्मा गर्न प्रबन्धन। तिनीहरूले कहाँबाट? Sorcery वा जादू? "किराया" छैन। किन्छ? त्यसपछि जहाँ पैसा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो? यो झोला बाहिर लिन्छ? हामी किन पसलहरुमा पहिले नै बेचिन्छ खिलौने छ?
मुद्दाहरू एक नम्बर चलान गर्न आदेश, हामी क्रिसमस विषय मा बच्चा सोभियत कार्टून देखाउन सक्छौं। त्यहाँ रंगीन हुनेछ र जीवन्त खिलौने सिर्जना प्रक्रिया चित्रण। बस सान्ता क्लाउस तिनीहरूलाई आफूलाई बनाउँछ, राखे। त्यसैले बोल्न, hendmeydom सारा वर्ष भएको छ। कि पछि, दिन, र के बिक्री उहाँले छोड्दा केही igrushechki। मार्गदर्शन काम सराहना छ - यो तपाईं 100 उपहार किन्न पर्याप्त छ रूपमा धेरै पैसा पाउन अनुमति दिन्छ। त्यसैले त सान्टा क्लाउस एक "हराइरहेको" खिलौने खरीद र संसारभरि देखि बच्चाहरु तिनीहरूलाई दिन सक्छ।
अराजकता के हो? पूर्ण स्वप्नलोक वा आतंक को एक शासनकालको?
हाम्रो दैनिक जीवनमा विदेशी शब्दहरू, वा के "जनवरी" छ?
मान, प्रदर्शन र सुविधाहरू: पुरुष र महिला को सुन्दर Adygei नाम
जो "संसारमा सबै भन्दा कम उमेर हजुरआमा" को शीर्षक मालिक?
स्कूटर यामाहा Jog ZR: प्राविधिक विनिर्देशों, वर्णन र मालिकको समीक्षा
मोबाइल फोन किनारा छ कि
अन्तर्वार्तात्मक विवाद। उदाहरणहरू र कारणहरू
ढोका गर्न रबर ढोका छाप: विशेषताहरु, फोटो